Galmudug oo soo saartay go’aan naadir ah oo ka dhan ah kooxda Shabaab | Hadalsame Media
Home Wararka Galmudug oo soo saartay go’aan naadir ah oo ka dhan ah kooxda...
Galmudug oo soo saartay go’aan naadir ah oo ka dhan ah kooxda Shabaab
(Gaalkacyo) 28 Maajo 2020 – Wasiirka Amniga Maamul-goboleedka Galmudug, Axmed Macalin Fiqi, ayaa sheegay in ganacsatada iyo shacabka reer Galmudug ay uga digayaan in ay Al-Shabaab siiyaan lacagaha loogu yeero ”Sakawaadka” oo uu ku tilmaamay inay tahay baad shacabka in muddo laga qaadayey.
Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in sida Al-Shabaab ula dagaalamaan oo kale ay ula dagaalami doonaan dadka Al-Shabaab siiya lacagaha baadda ah.
Wasiirka Amniga Maamul-goboleedka Galmudug, Axmed Macalin Fiqi, ayaa Waxaa uu sheegay in dhowaan ay Baarlamaanka Galmudug horgeyn doonaan sharciga la dagaalanka Argagixisada, si ay wax badan uga bedelaan qorshaha lagula dagaalamayo Al-Shabaab iyo cidda taageerta.
Tillaabadan ayaa ah mid naadir ah oo ay hirgelinteedu u baahan tahay wada shaqayn adag misna daacad ah oo ka dhex dhacda DF, Maamullada iyo dadwaynaha.
Previous articleDHACDO DHIILLO LEH: Aabbe gabadhiisa qoorta uga jaray xiriir jacayl dartii & doodda oo gaartey ilaa Baarlamanka + Sawirro
Next articleMudaaharaadkii Minneapolis oo boob isu bedeley, Soomaali ka qayb qaadatay & dhimasho ka dhacday + Sawirro & Muuqaal